Red Hat Enterprise Linux 7.6 Beta manafaka izao | Avy amin'ny Linux
Navoaka vao tsy ela ny kinova Beta vaovao an'ny Red Hat Enterprise Linux 7.6 ary miaraka aminy no hatsaraina ny fanatsarana vaovao ary indrindra ireo fiasa sy fitaovana vaovao kasaina hatao amin'ny kinova miorina.
Ny kinova fitsapana Red Hat Enterprise Linux 7.6 Beta vaovao, mitondra fanatsarana ny fiarovana Linux, fitaovana fitantanana ary kaontenera.
1 Momba ny Red Hat Enterprise Linux
2 Momba ny kinova beta vaovao an'ny Red Hat Enterprise Linux
2.1 Fitantanana sy mandeha ho azy
3 Sintomy ny Red Hat Enterprise Linux 7.6 Beta
Momba ny Red Hat Enterprise Linux
Ho an'ireo mpamaky izay tsy mahalala ny Red Hat Enterprise Linux ihany koa fantatra amin'ny fanafohezana RHEL azoko atao aminao ny milaza fa fizarana GNU / Linux novokarin'i Red Hat ity.
Io no kinova ara-barotra miorina amin'ny Fedora izay mifototra amin'ny Red Hat Linux teo aloha, mitovy amin'ny fomba ifandraisan'ny Novell SUSE Enterprise (SUSE Linux Enterprise Desktop sy SLE Server) amin'ny OpenSUSE na Mandriva Corporate momba an'i Mandriva Linux One.
Na dia mivoaka isaky ny 6 volana na mihoatra aza ny kinova vaovao an'ny Fedora, mazàna ireo RHEL dia mivoaka isaky ny 18 ka hatramin'ny 24 volana.
Ny tsirairay amin'ireo kinova ireo dia manana andiana serivisy ampiana lanja mifototra amin'ny iorenan'ny orinasanao (fanohanana, fanofanana, fakan-kevitra, fanamarinana sns.)
Ny kinova tsirairay navoaka amin'izao fotoana izao dia manana fanohanana farafahakeliny 10 taona hatramin'ny datin'ny famoahana GA (Fahafahana ankapobeny) (na kinova mifarana amin'ny .0), mandritra io fotoana io, fizarana maro ny fanohanana no mizara.
Momba ny kinova beta vaovao an'ny Red Hat Enterprise Linux
Vaovao farany avy amin'ny Red Hat Enterprise Linux 7 dia natao hanomezana fifehezana, fahatokisana ary fahalalahana hitaky tontolon'ny asa aman-draharaha, ary koa mba haharaka ny fanavaozana ao anaty rahona ary manohana ireo mpitantana famokarana informatika vaovao sy efa misy ao amin'ny orinasa.
Ity kinova beta vaovao ity dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fanohanana ny rahona sokajy orinasa raha mbola manohana ny vahaolana IT nentim-paharazana.
Red Hat Enterprise Linux 7.6 beta dia manampy fiasa vaovao sy fanatsarana, manasongadina ny fiarovana sy ny fanarahan-dalàna, ny lafiny fitantanana sy ny mandeha ho azy ary ny fanavaozana ny fonosana Linux.
Mba hifaneraserana akaiky kokoa amin'ireo kaonteneran'ny Linux sy ny fandrosoan'ny rahona, Red Hat Enterprise Linux 7.6 beta dia manolotra an'i Podman, izay ao anatin'ny Red Hat Lightweight Container Toolkit.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny module module 2.0 Trusted Platform Module (TPM), no nanitarana ny anjara asan'ny NBDE hanome fiarovana roa ho an'ny rahona hybrid cloud: ny rafitra miorina amin'ny tambajotra ho an'ny rahona sy ny fampiasana ny fametrahana TPM anatiny dia manampy amin'ny fitazonana ilay kapila azo antoka kokoa.
Hifangaro tsara kokoa amin'ny fepetra fanoherana ny fidirana an-tsokosoko,nohatsaraina ny asan'ny firewall amin'ny alàlan'ny Red Hat Enterprise Linux.
Ny fitaovana NFT baiko baiko izao dia manome fanaraha-maso tsara kokoa amin'ny sivana fonosana, manome fahitana manerantany kokoa sy fanamorana tsotra ho an'ny filaminan'ny rafitra. Red Hat Enterprise Linux 7.
Fitantanana sy mandeha ho azy
Ny asa fitantanana ny Red Hat Enterprise Linux 7 dia manatsara hatrany, ary Ny famoahana beta farany dia manolotra fanatsarana ny console web an'ny Red Hat Enterprise Linux, ao anatin'izany:
Asehoy ny fanavaozana azo jerena ao amin'ny pejy famintinana ny rafitra
amboary ho azy ny sonia tokana ho an'ny fitantanana ny maha-izy azy mba hanamora ny fanatanterahana an'io asa io ho an'ny mpitantana fiarovana
Fifanarahana hifehy ny serivisy firewall
Farany, ny fampidirana Berkeley Extended Packet Filter (EBPF) dia manome rafitra azo antoka sy mahomby kokoa amin'ny fanaraha-maso ny hetsika ao anaty kernel ary manampy amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso tambajotra hafa sy fitaovana fanaraha-maso ny fampisehoana amin'ny ho avy.
Sintomy ny Red Hat Enterprise Linux 7.6 Beta
Tokony ho tsaroan'izy ireo fa kinova fitsapana io ary tokony hampiasaina hizaha toetra azy fotsiny amin'ny masinina virtoaly na amin'ny solosaina izay tsy iharan-doza ny lesoka mety hitranga, ity beta ity dia natomboka tamin'ny ankapobeny mba hitaterana ireo lesoka hitan'ireo mpampiasa izay nisedra azy.
Azonao atao ny mangataka ny sary beta ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Red Hat Enterprise Linux 7.6 Beta manafaka izao